ရှညောသား: April 2018
ထိုင်းရောက် မြန်မာ မိသားစု ရဲ့ သင်္ကြန် ထမင်းပွဲ
မုန့်လုံးရေပေါ် လူစုံလုံးတော့ အရွယ်စုံစားရတယ်
သင်္ကြန်အကျ နေ့တုန်းက ကျောင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာမောင်နှမတစ်တွေစုပေါင်းပြီးမြန်မာထမင်းဟင်းနဲ့
မုန့်လုံးရေပေါ်လုပ်စားဖြစ်ကြတယ်။ကျောင်းက ၅ ရက်လောက်ပိတ်တော့နယ်ခံကျောင်းသားတွေအားလုံး
ဟင်းချက်တတ်တာသိတော့ဟင်းကူချက်ဖို့ပြောကြတယ်။ငိုချင်ရဲ့လက်တို့ဆိုသလို ချက်ချင်လျက် အိုးတွေ့
စေးနေတာ။စားဖူးသမျှထဲမှာအကြိုက်ဆုံးမုန့်လုံးရေပေါ်ပါ။အိမ်မှာဆို အလွန်းဆုံး ငါးလုံးပဲ ပိုမစားဘူး။
ပြေသင်္ကြန်စာလေးပါ စားလိုက်ရလို့ ကျေနပ်မိပါတယ်။
ပဲကုလားဟင်း ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက် သရက်သီးတို့စရာ
သင်္ကြန်တွင်း ထမင်းဆိုင်ပိတ်လို့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတာ
ထိုင်း ထမင်းဟင်းတွေနဲ့အကျင့်ဖြစ်နေသော်လည်း တခါတရံမြန်မာထမင်းဟင်းစားရတဲ့အခါဗိုက်ပြည့်လို့
တော်ရတယ်စိတ်ကစားချင်နေတုန်းဆိုတာလို ခေါင်းမဖော်တမ်းလွဲလိုက်ကြတာ အလှူအိမ်ရောက်နေသလို
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, April 26, 2018 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အဆောင်မှာ ဘုရားကိုရေသပ္ပာယ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတာပါ နံနက်ပိုင်းမှာ ဘုရားကိုရေသပ္ပာယ်ခဲ့ပါတယ်
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, April 19, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဆောင်ခလာမင်းသား ရဲ့ ရင်ခွင်ကနွေရာသီမြင်ကွင်း
ရွာမှာတော့ နဘဲ ပန်းခေါ်တယ်ထင်တာပဲ
ဒီနေ့ကစပြီး သူတို့ ထိုင်းနှစ်သစ်ကူးမို့ ကျောင်းလေးရက်ပိတ်ထားတယ်။ အဆောင်မှာနေရတာလည်းပျင်းလို့ဌာနမှာလာပြီး လုပ်စရာရှိတာလေးတွေလက်စသတ် စာလည်းဖတ်ရင်း
ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိတဲ့ သင်္ကြန်ကိုမျှော်ရင်း ငေးရင်း....
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, April 12, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ရွှေအမှိုက်လေး တစ လွင့်နေတယ်
photo credit >>> Google images
အဲ့ဒီစာစုလေးထဲက "အမှိုက်" ဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်လေးပါယူပြီးစာစုလေးတွေဆက်ရေးဖြစ်တယ်။ ကျနော်ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အချိန်က ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေ စပြီး ခေတ်စားခါစ ဆယ်တန်းအတူအောင်တဲ့သူငယ်ချင်းက ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ အမှတ်မီတယ်။ကျနော်က အမှတ်မမီတော့ ရိုးရိုးမေဂျာနဲ့ပဲ မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်မှာ ဒေး တက်ခွင့်ရတယ်။ ထိုစဉ်က ရိုးရိုးမေဂျာသင်တဲ့ ကျောင်းတွေကို အမှိုက်ပုံ ဆိုပြီး ပြောကြတဲ့အချိန်ပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ကျနော်က အမှိုက်တစ အဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ ဒါလေးကို သူငယ်ချင်းဆီပြန်ပြောတဲ့အနေနဲ့ စာစုလေးရေးခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီစာစုကို သဘောကျတဲ့ မေဂျာပထမနှစ်မှ ညီလေးတစ်ယောက်က ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာမှာ နှစ်ကူးလက်ဆောင် အဖြစ်နဲ့ ပို့စ်ကခေါင်းစဉ်အတိုင်း ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပို့လာတယ်။
သူပို့လာတဲ့ ကဗျာလေးကို ဒီမှာ အမှတ်တရအဖြစ်နဲ့ ပြန်သိမ်းရင်း မျှဝေပေးပါတယ်။
ရွှေအမှိုက်လေး တစ လွင့်နေတယ်
၂၀၁၈ နှစ်ကူးလို့ ရာသီတွေ
မင်းတို့ပြောတဲ့ အမှိုက်ထဲက ရွှေဖြစ်အောင်
ငါ့ကို လိုအပ်သူမှန်သမျှ အတွက်
ဆွဲလက်စ ပန်းချီကိုတော့ ဆွဲနေဦးမှာပဲ....
အလင်းနှစ်ရဲ့ မြန်နှုန်း သီအိုရီကို
၁၀ က ၉ ဖြစ်သွားတယ်
၈ က ၉ ဖြစ်လာတယ်....
သူငယ်ချင်းပြောတဲ့အချိန်တုန်းက အသက်အရွယ်အရ ငယ်သေးတော့ စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှမခံစားတတ်ခဲ့
ဒါပေမဲ့ အမှိုက်ပုံမှာနေတာကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ သူပြောခဲ့တဲ့အမှိုက်ပုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့ ရှင်းလင်းချက်ဖွင့်ကြည့်ရင်း အထက်ပါကဗျာထဲက စာသားလေးတွေလို ရင်ထဲကစကားလုံးတွေ ထွက်ကျလာပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမှိုက်တစ ဖြစ်နေရတာကို ဂုဏ်ယူမိသလို ကျေနပ်နေမိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီ အမှိုက် တစ သည်
ပြဿဒ်မီးလောင်စေတဲ့ အမှိုက်မျိုးမဟုတ်ဘဲ သူနဲ့ နီးစပ်ရာ အမှိုက်စတွေကို ရွှေရောင်ပြောင်းနိုင်အောင်
ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် သဲတပွင့်နေရာမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အမှိုက်တစဖြစ်နေလို့ပါ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, April 10, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
တူးပို့သံနဲ့ ဝေးတဲ့ ပိတောက်
photo credit>>google images
အချိန်ယူဖတ်ခဲ့ရတာကအခုဆိုတကယ်စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရင်စာမျက်နှာ နှစ်ရာကျော်သုံးရာပါတဲ့ စာအုပ်ကို
မလှမ်းမကမ်းမှာရွှေဝါရောင်ပိတောက်ပန်းတွေပွင့်နေတာကိုတွေ့တယ်။သြော်...သင်္ကြန်ကြိုပိတောက်တွေ ပွင့်နေတာပါလားလို့ စိတ်ထဲကရေရွတ်ရင်း ပိတောက်ပန်းနံ့တွေကိုတဝကြီးရှုရှိုက်ပြီးကျောင်းကိုဆက်သွားခဲ့
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, April 06, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook